Supfrica Apk Download Ho an'ny Android [Latest 2022] | APKOLL
Supfrica Apk Download ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]
Mandany vola be ve ianao amin'ny fifandraisana any ivelany amin'ny olona ary mitady fomba tsotra? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny hoe Supfrica. Io no rindranasa Android farany indrindra, izay manolotra serivisy serasera mandroso sy tsotra indrindra ho an'ny mpampiasa mba hifandraisana manerana an'izao tontolo izao. Raiso ity rindrambaiko ity amin'ny fitaovana Android anao ary atombohy miresaka amin'ny namanao na aiza na aiza.
Ny Internet dia iray amin'ireo teknolojia tsara indrindra ho an'ny olona, ​​izay ahafahan'izao tontolo izao mifandray amin'ny tsirairay. Misy fomba maro hifandraisana amin'ny olona samihafa. Tany am-boalohany dia nampiasa fifandraisana an-tariby ny olona, ​​​​fa rehefa ela ny ela dia nampidirina eny an-tsena ny fitaovana Android.
Misy karazana fifandraisana maro, saingy matetika ny olona dia mampiasa sara amin'ny finday hanaovana antso na fifandraisana. Ny dingana dia tsotra amin'ny fampiasana, saingy lafo be ny fanaovana fifandraisana any ivelany. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiasa vola bebe kokoa amin'ny antso tokana.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa mahavariana ity ho anao rehetra, izay ahafahanao mifampiresaka eran'izao tontolo izao amin'ny olona amin'ny sarany ambany indrindra. Misy fiasa samihafa hita ao amin'ity fampiharana ity, izay manome ny mpampiasa hankafy. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary mahazoa ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'izany.
Topimaso momba ny App Supfrica
Izy io dia fampiharana fifandraisana Android, izay manolotra ny mpampiasa hifandray amin'ny olon-kafa rehetra manerana izao tontolo izao. Izy io dia manome serivisy an-tserasera ho an'ny mpampiasa, izay ahafahan'izy ireo mifandray mora foana amin'ny hafa. Misokatra ho an'ny rehetra ny sehatra, izay tsy misy sarany. Noho izany, azonao ampiasaina maimaim-poana ity fampiharana ity ary mankafy izany.
Misy endri-javatra samihafa azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa, fa ny fifandraisana Internet no loharano lehibe. Noho izany, mila mampiasa angona findainao na serivisy WiFi ianao hahazoana ilay fampiharana. Ny fizotran'ny fisoratana anarana dia tsy maintsy atao ihany koa, izay mitaky ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny finday ny mpampiasa.
Tsy maintsy miditra isa finday manan-kery ianao, izay misy amin'ny fitaovanao izao. OTP dia halefa amin'ny fampiharana ho fanamarinana. Mila miditra ny kaody OTP ianao ary mamita ny fizotry ny fisoratana anarana. Raha vantany vao vita ny fisoratana anarana dia afaka mampiasa an'io rindrambaiko amin'ny fitaovana Android anao ianao.
Afaka mahita mpampiasa hafa an'ity fampiharana ity amin'ny lisitry ny lisitry ny fifandraisana ianao. Ho hita daholo ny fifandraisanao rehetra, fa amin'ny mpampiasa an'ity fampiharana ity ihany no azonao atao. Noho izany, azonao atao ny manasa ny namanao eo amin'ny lampihazo mba hiditra sy hiresaka.
Ny vondrona samihafa dia azo atao mora foana ary manampy olona samihafa manerana an'izao tontolo izao. Azonao atao ny mamorona na manatevin-daharana vondrona samihafa hizara sy hahazo atiny avy amin'ny olona maro na hizara amin'ny olona maro. Azonao atao ny mizara vaovao 256 amin'ny fotoana iray, izay midika fa azo zaraina eo noho eo izay fampahalalana manan-danja.
Ny serivisy fifandraisana tsotra dia misy ihany koa ho an'ny mpampiasa, izay ahafahanao mifampiresaka amin'ny olona tokana. Izy io dia manome ny mpampiasa hizara lahatsoratra, naoty feo, horonan-tsary, sary, ary rakitra hafa. Raha te hanao antso ianao dia azonao atao koa ny mampiasa ny rafitra fiantsoana feo.
Misy ihany koa ny rafitra antso an-tsary, izay ahafahan'ny mpampiasa mifampiresaka mivantana amin'ny mpampiasa hafa. Ny serivisy fifandraisana rehetra dia manome tsiambaratelo avo lenta amin'ny alàlan'ny fanafenana end-to-end. Noho izany, tsy hozaraina amin'iza na iza ny angonao, na dia amin'ny orinasa aza.
Raha mbola te hampiasa WhatsApp ianao, na dia taorian'ny fanovana tato ho ato aza ny politikan'ny tsiambaratelo. Avy eo izahay manana kinova novaina ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe OG WhatsApp Pro. Azonao atao ny mampiasa azy io mba hahazoana endri-javatra fanampiny amin'ny fampiharana ary azonao atao ny mankafy azy.
Saingy, raha tsy tianao izany dia ho anao ity fampiharana ity. Makà Supfica ho an'ny Android ary manomboka mahazo politika avo lenta momba ny fiarovana eo amin'ny fifandraisana ara-tsosialy. Raha mila fampiharana mitovy bebe kokoa ianao dia mitsidiha ny tranokalanay.
Anaran'ny fonosana com.supfrica.Appsfrica
Fifampiresahana haingana sy azo antoka
Lahatsoratra, Feo feo, Video, Sary, ary fizarana data hafa
Serivisy fifampiresahana amin'ny feo sy horonan-tsary
Serivisy momba ny tsiambaratelo avo lenta
Serivisy fifampiresahana amin'ny vondrona
Rafitra fizarana tantara
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mandany ny fotoanao amin'ny fitsidihana sehatra maro ianao. Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny amin'ity pejy ity ianao ary kitiho eo. Ny fisintomana dia hanomboka ho azy afaka segondra vitsy aorian'ny vita ny paompy.
Supfrica Apk no sehatra tsara indrindra ho an'ny olona izay maniry sehatra fifandraisana sy filaminana ary azo antoka ary haingana. Raiso ity rindrambaiko ity ary mifampiresaha amin'ny namana eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet fotsiny. Raiso amin'ny Android ity ary ankafizo.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Supfrica, Supfrica Apk, Supfrica App, Supfrica ho an'ny Android Post Fikarohana